Fetin’ny Fahaleovantena : misy fanavahana ireo mpanakanto manafana “podium” | NewsMada
Fetin’ny Fahaleovantena : misy fanavahana ireo mpanakanto manafana “podium”
Tsy vao izao, fa efa hatramin’izay! Efa be ny fitarainana nataon’ireo mpanakanto vitsivitsy. Efa maro koa ny fanairana ireo tompon’andraikitra, saingy toa antso an’efitra fotsiny izany. Nivoaka mantsy ny fandaharam-potoan’ny “podium”, antomotra toa ny mahazatra vao ampahafantarina.
Tsikaritra fa misy indray ny fanavahana amin’ireo mpanakanto sy ny mozika voiziny. Saika ny mpivoy ny mozika mafana hatrany mantsy no mahazo laka ary tsy misy na zara raha misy ireo karazana mozika hafa.
“Efa nanipy hevitra ao ny mba hanomezana anjara toerana ny mpiangaly mozika akostika amin’ny fetin’ny 26 jona. Efa nisy mihitsy tolo-kevitra, hampiasana trano filanonana samihafa amin’izany, kanefa dia tsy nohainoana…” hoy ny fanambarana nataon’Ifanihy, anisan’ireo mpivoy ny “vazo miteny”. Tsy izy irery, fa maro koa ireo mpanakanto na tarika manontany tena toa an’Ifanihy, amin’ny mety ho antony tsy mba hiantsoana azy ireo.
Tsy malaza? Tsy mahavory mpijery? Tsy mahasarika ny mpifidy aoriana kely? Mety ho antony heverin’ireo mpikarakara avokoa izany.
Kanefa dia malalaka ny sehatra sy ny fotoana hilalaovana, satria tsy amin’ny toerana iray. Raha ny eto Antananarivo sy ny manodidina fotsiny, handray ny “podium” ny eny Betongolo, rahampitso. Hitohy eny Ambohimanarina ny 21 jona, eny Antaninkatsaka Itaosy ny 22 jona, any Ankaraobato, Andohatapenaka ary IVato ny 23 jona, kianja Mahitsy, Anosizato sy Ambohimangakely ny 24 jona ary eny Ankorondrano, Sabotsy Namehana ary Imerintsiatosika ny 25 jona.
Ny tsikaritra aloha, toa fety teren-ko masaka avokoa, raha tarafina tamin’ny fanombohana teny amin’ny Coliseum, izay maimaimpoana nefa tsy nahasarika mpijery. Asa, mety tsy mbola tafiditra anatin’ny volon’andro fety ny vahoaka?